Sool: Ceel Biyood Laga Hirgeliyay Degaanka Gambadha+Sawirro | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Sool: Ceel Biyood Laga Hirgeliyay Degaanka Gambadha+Sawirro
Published on August 27, 2016 by sdwo · No Comments
Gambadha (SDWO.com): Wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Somaliland Baashe Cali Jaamac, ayaa maanta xadhiga ka jaray ceel-biyood ay wasaaradiisu ka hirgelisay tuuladda Gambadha ee gobolka Sool. Kaasi oo noqonaya ceelkii u horeeyay oo laga maalgeliyo miisaaniyadda dawladda.
Ceel-biyoodkaasi oo laga maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda biyaha ayaa la sheegay in uu saacadiiba soo saarayo 100 foosto.iyadoo in ceelkaasi laga qodo degaanka Gambadha ayaa ka danbeeyay codsi ka yimid odayaasha degaankaasi.
Munaasibadda loo sameeyay xadhig ka jarista ceel-biyoodkaasi oo lagu qabtay goobta uu ceelkaasi ku yaallo ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka khayraadka biyaha, isu-duwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Sool iyo masuuliyiin ka socday hay’adda IRC, iyo xubno metelayay shirkadda Sahan oo iyadu ceelkaasi qoday.
Wasiirka wasaaradda khayraadka Biyaha Baashe Cali Jaamac, oo halkaasi hadal ak jeediyay ayaa sheegay in ay wax lagu farxo tahay in biyo macaan laga hello ceelkan laga qoday Gambadha. Isagoo xusay in ceelkani uu noqonayo kii u horeeyay ee laga maageliyo lacagta miisaaniyadda dawladda.
Waxaanu yidhi “Miisaaniyadda wasaaradda biyaha, waxaa sanadkan noogu jirra hal milyan oo dollar, oo dawladu ugu tallo gashay in ceelal lagu qodo. Ceelkani wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee miisaaniyadda dawladda laga bixyo. Kuwo kale oo badana waa la qodi doonaa, waxaana ku xigi doona ceel laga qodayo indhanka Baligubadle, meeshaasi oo meel oomane ah”.
Baashe Cali Jaamac, waxa kale oo uu sheegay in ay u qorshaysan tahay in ceelal kale oo badan sanadkan goboladda dalka laga qodo. “Waxa kale oo miisaaniyadda ku jira ceel kale oo Boorama laga qodi doonno. Lacagta loogu tallo galay in ceelasha lagu qodaana dalka oo dhan way u qaybsan tahay” ayuu yidhi wasiir Baashe.
Isu-duwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Sool Axmed Maxamed Xirsi, oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa faahfaahin ka bixiyay baahidda ay bulshadda degaankaasi u qabeen in ay helaan ceelkani iyo sidoo kale tiradda ceelasha ee ay xukuumadda gobolka Sool ka fuliyay mudooyinkii u danbeeyay.
“Ceelkani oo ka danbeeyay amar uu wasiirka biyuhu bixiyay, oo maanta xadhiga aad ka jarayso, bulshadda degaanka Gambadha aad iyo aad ayay u soo dhawaynayaan. Mudadii ay xukuumadani jirtay, ama wasiir aad adigu xilka haysay, waxaa mandaqadda gobolkan Sool laga hirgeliyay mashaariic badan oo horumarineed.
Marka laga bilaabo Buuhoodle, Taleex ilaa Awr-boogays. Haddii aan ku hor marro ceelasha dhaadheer ee la qoday, waa 16 ceel-biyood”.
Agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda Khayraadka biyaha oo isna xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay in ceelal badan oo ku yaalla degaamo ka tirsan gobolka Sool dayac-tir lagu samaynayo, halka qaar cusubna laga qodayo.
“Waxaa jira ceelal kale oo ku yaalla gobolka Soo loo la dayac-tirayo. Ceelka degaanka waxaa hadda dayac-tir ku wadda hay’adda ICR. Taleex, waxaa isna laga wadaa ceel la dayac-tirayo, meesha la yidhaahdo Huftiro, iyadna hay’adda IRC ayaa ceelkii biyaha dayac-tiraysa, Caroolay iyadna mid bay ka dayac-tirayaan”.
Si kasta ha ahaatee, ceel-biyoodkan uu maanta xadhiga ka jaray wasiirka biyaha Somaliland ee laga hirgeliyay tuuladda Gambadha ayaa noqonay kii ugu horeeyay ee dagaankaasi laga qodo, kaasi oo bulshadda degaankaasi ay baahi weyn u qabeen.